Ciidama amaanka magaalada Dhuusamareeb oo gacanta ku dhigay qaar ka mid ah wadayaasha Bajaajta. – The Voice of Northeastern Kenya
Ciidama amaanka magaalada Dhuusamareeb oo gacanta ku dhigay qaar ka mid ah wadayaasha Bajaajta.
Wararka ka imaanaya Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in Maanta Saldhiga Booliiska ee magaaladaasi la isugu geeyey Wadayaasha Mootooyinka Bajaajta ee magaaladaasi ka howlgala sidoo kale waxaa gacanta lagu dhigay ilaa 20 Mooto Bajaaj ah.
Xogta aan helayno ayaa waxa ay sheegaysaa in loo haysto Askari ka tirsan Ciidamada oo Xalay Bartamaha Magaalada looga Furtay Qori uu watay, iyadoona la sheegay in qoriga ay furteen Rag Bastoolado ku hubaysan, kuwaasi oo watay Mooto Bajaaj.
Xariga wadayaasha Mooto bajaaj ee Magaalada Dhusamareb ayaa Saamayn ku yeeshay Dad waynihii isticmaalayey, kuwaasi oo Maanta Magaalada lagu arkayo iyagoo Lugaynaya ila iyo hada majiro wax War ah oo ka soo baxay Maamulka iyo saraakiisha Ciidamada degmada Dhuusamareeb oo ku saabsan howlgaladaan lagu soo xiray wadayaasha mooto bajaajta.
← Ra’isulwasaaraha Soomaaliya oo sheegay in Soomaalidu ay isku raacday nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa.
Dowlada Maraykanka oo sheegtay inay duqaysay fariisamo Al-shabab. →